कर्णालीको माया - व्यंग्य - प्रकाशितः असार २०, २०७६ - नेपाल
हिजोआज हामी कर्णालीलाई खुब माया गर्न थालेका छौँ । हुन त पहिला–पहिला पनि गर्थ्यौं तर दुई तिहाइको सरकार बनेपछि कर्णालीको माया बढी नै उर्लेर आएको छ । खासगरी सरकारइतर वृत्तमा कर्णालीको माया गाढा छ । सरकारले जब कर्णालीलाई बिर्सेर कुनै निर्णय गर्छ, तब प्रतिपक्षीका प्रतिक्रियामा कर्णाली उर्लिहाल्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष, सरकारबाहिरका दल, सरकारमै रहेका तर मन्त्री हुनबाट वञ्चित नेताहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वमन्त्रीहरु, पूर्ववरिष्ठ कर्मचारी, सांसद, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ता सबैले सरकारका निर्णयविरुद्ध कर्णालीलाई ठड्याउँछन् र सरकारको उछितो काड्छन् । भाषणमा, लेखमा, अन्तर्वार्तामा, संसद्मा, सडकमा, फेसबुकमा, ट्वीटरमा जताततै कर्णालीको चिन्ता व्याप्त छ । पदमा हुँदा बिर्सिनेले पनि पद जानेबित्तिकै कर्णालीलाई सम्झिएका छन् । सरकारका अनेकौँ नयाँ निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै कर्णालीमा ठोकिन थालेका छन् । सबैको साझा मत छ, सरकारले पहिला कर्णालीलाई हेर्नुपर्छ, अरु कुरा हुँदै गर्छ ।
सरकार भन्छ रेल, तेल, पानीजहाज ल्याएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछु, प्रतिपक्ष एकै स्वरमा कराउँछ, कर्णालीका जनतालाई बिहानबेलुका खानलाई अन्न छैन, किन चाहियो रेल ? किन चाहियो पानीजहाज ? अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर दशकौँ लगाएर रेल ल्याउने पैसाले त कर्णालीका प्रत्येक जनतालाई धनी बनाउन सकिन्छ । कर्णालीका गाउँगाउँमा विकास पुर्‍याउन सकिन्छ ।
काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदाहुँदै लुम्बिनीमा अर्को विमानस्थल बनाएर सरकारले अर्बौं रकम सक्यो, अब निजगढमा बनाउने भन्दै छ । त्यो बनाउनुभन्दा कर्णाली प्रदेशका सबै ठाउँमा हेलिप्याड बनाएर त्यहाँका सुत्केरी तथा बिरामीको आपतकालीन उद्धार गर्न सकिन्छ ।
सुविधासम्पन्न काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बनाउने नाममा करोडौँ खर्च भइरहेको छ । त्यसरी गरिने फजुल खर्चले त कर्णालीमा जडीबुटी उद्योगै खोल्न सकिन्छ । त्यहाँबाट तुइन विस्थापित गरेर जनतालाई अकाल मर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । कर्णालीप्रतिको माया यसरी प्रकट भइरहेको छ ।
कामकुरा कर्णालीतिर कुम्लो बोकी दिल्लीतिर भनेजस्तो यो सरकारले देशमा आइफा कि के भन्ने अवार्ड कार्यक्रमका लागि भारतीय कम्पनीलाई एक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । कर्णालीका जनता भोकै छन्, नांगै छन्, त्यहाँका भोकानांगा जनतालाई हेर्न छाडेर करोडपति इन्डियन कलाकारलाई पोस्न ठूलो रकम खर्च गर्न तत्पर हुने यो सरकारको नियत के हो ? त्यो पैसाले त कर्णालीका गरिब बालबालिका र महिलालाई कुपोषणबाट बचाउन सकिन्छ । यहाँ पनि कर्णालीकै चिन्ता छ ।
हुँदाहुँदा सरकारले अब कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने गुड्डी हाँक्न थालेछ । यस विषयमा पनि हामीले चुप लागेर बस्नु हुँदैन, सरकारविरुद्ध खनिनुपर्छ । कर्णालीका मान्छेलाई बिरामी हुँदा खाने सिटामोल छैन, पेट्रोलियम उत्खननमा करोडौँ रकम सिध्याउने ? गरिब जनतासँग कर उठाएर जम्मा गरेको रकम यसरी सक्ने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो ? त्यो पैसाले त कर्णालीका कुनाकुनामा बिजुली पुर्‍याउन सकिन्छ ।
यसरी हामी सबै कर्णालीको चिन्तामा लागेका छौँ, अझै लाग्नुपर्छ । कर्णाली देख्नु पनि पर्दैन, टेक्नु पनि पर्दैन, नाम सुनेको छ भने फेसबुकमा, ट्वीटरमा लेखिरहनुपर्छ । झापामा बसे पनि, काठमाडौँमा बसे पनि वासिङ्टन वा लन्डनमा रहे पनि कर्णालीको मायामा आँसु निकालिरहनुपर्छ । यसरी सबका सबले चिन्ता प्रकट गरेपछि कुनै न कुनै दिन कर्णालीको पनि कायापलट कसो नहोला !
प्रकाशित: असार २०, २०७६
थप केही व्यंग्य बाट
चित्तको भित्तोमा एक प्रश्न
भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन शिक्षा
होहल्ला वर्ष ०७५
रमिता हेरिरहन पाइयोस्
माघ १६, २०७५